အောက်တိုဘာလ 2017 | 10 ၏စာမျက်နှာ 105 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 10)
လက်ထောက်ကင်မရာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်မိုင်ယာမီ, FL Duration:5ရက်သတ္တပတ်, 10 / 30 လစာ $ 300 / 12 ယောဘသည် 10 / 25 / 17 10 / 30 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply တစ်ခုဖွဲ့စည်းရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted စတင်သည် သည် Liberty စီးတီးစစ်သည်များ pee-Wee ဘောလုံးလိဂ်အောက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်စာတမ်း-Series တွေကိုအထောက်အကူပြုဖို့ AC အတွေ့ကြုံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ယာဉ်အမှုထမ်း2ကို Canon C300 Mark II ကင်မရာများကိုအသုံးပြုသည်နှင့် 1 ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Warsaw ကို, နယူးယော့ Duration: 1 နေ့က - 10 / 29 လစာ $ 168 + မိုင်အကွာအဝေး & အစားအစာယောဘသည် 10 / 25 / 17 အပေါ် posted 10 / 29 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ငါရန်လိုအပ်ပါတယ်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား ဝါဆော, နယူးယော့ဧရိယာထဲမှာပစ်ကပ် 1 အလားအလာပါဝင်သူမှ 1 PA ဆိုပြီးငှားရမ်းခြင်းနှင့်ရန်နှင့်တစ်ဦး DRs မှသူတို့ကိုယူပါ။ ချိန်းအနီးအနားမှာ ...
ဝက်နေ့အဘို့အသံ Recordist ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Santa Fe, မိုင် Duration: Tuesday, 10 / 30 လစာ $ 350 (5 နာရီ) ။ 150 / 10 / 25 17 / 10 / 30 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply တည်နေရာအသံ Professional ကတခုတခုအပေါ်မှာမရရှိနိုင်တနင်္လာနေ့ရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted အသံကိရိယာအစုံငှားရမ်းယောဘသည်များအတွက် $ 17, 10 / 30 နံနက်အဘို့ - တစ်ဝက်နေ့က - shoot @ အဆိုပါ LaQuinta ...
Paid Internship ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: 8 ရက်သတ္တပတ် 11 / 10 / 25 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်လစာ $ 17 / နာရီယောဘကိုကျနော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ full- များအတွက်အချိန်ပြည့်, paid အလုပ်သင်ဆရာဝန်ရှာကြသည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား ဝန်ဆောင်မှု, unscripted ထုတ်လုပ်မှုရုံး။ လုပ်ငန်းတာဝန်များယေဘုယျရုံးအကူအညီကနေအလုပ်လုပ်အထိ production- အတွက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာပြပွဲပေါ် မူတည်. တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည် ...
28 / 29 / 250 အပေါ် posted လက်ထောက်ကင်မရာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ချီကာဂို, IL Duration: အောက်တိုဘာလ 12th နှင့် 10th လစာ $ 25 / 17 ယောဘသည် 10 / 28 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ချီကာဂိုဧရိယာ၌လိုအပ်သောအလုပ်အကိုင်အကင်မရာလက်ထောက်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား တစ်ဦး reality- စီးရီးသည်။ တစ်ဦး AC အအဖြစ်နှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ rate $ 250 / 12 ဖြစ်ပါတယ်။ ** သင်ဟာတစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည် ...
ဇာတ်လမ်းထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: 6-8 ရက်သတ္တပတ်, 10 / 30 / 10 25 / 17 / 10 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply မင်္ဂလာပါအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted 30 / 17 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘစတင်သည်! WEtv အသစ်တစ်ခုစာရွက်စာတမ်းစီးရီးအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွေ့အကြုံရှိပုံပြင်ထုတ်လုပ်သူများရှာဖွေနေ။ ခန့် 10-30 ပတ်တနင်္လာနေ့6/ 8 စတင်ခြင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အသေးစိတ်ကိုယခု Subscribe ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဘတ်ဖလိုး, နယူးယော့ Duration: 1 နေ့က - 10 / 29 လစာ $ 168 + မိုင်အကွာအဝေး & အစားအစာယောဘသည် 10 / 25 / 17 အပေါ် posted 10 / 29 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ငါရန်လိုအပ်ပါတယ်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား အဆိုပါဘတ်ဖလိုး, နယူးယော့ဧရိယာထဲမှာပစ်ကပ် 1 အလားအလာပါဝင်သူမှ 1 PA ဆိုပြီးငှားရမ်းခြင်းနှင့်ရန်နှင့်တစ်ဦး DRs မှသူတို့ကိုယူပါ။ ချိန်း Buffalo ...
10 ၏စာမျက်နှာ 105«ပထမဦးစွာ...«89101112 » 203040...နောက်ဆုံး»